Shirkada Caymiska ee Oromia ayaa lagu wadaa inay kor u qaaddo raasamaalka ay bixiso oo ay ka dhigi doonto hal bilyan oo birr - ዜና ከምንጩ
Shirkada Caymiska ee Oromia ayaa lagu wadaa inay kor u qaaddo raasamaalka ay bixiso oo ay ka dhigi doonto hal bilyan oo birr
Shirkada Caymiska ee Oromia S.C. Shirweynihiisa loo dhanyahay ee qabsoomay December 10, 2014, waxa ay ku shaaciyeen in ay go’aamiyeen in la kordhiyo raasamaalka la bixiyo oo ay ahayd nus bilyan birr, lagana dhigo hal bilyan oo birr. Waxaa la ogaaday in shirkadda caymisku ay go’aansatey in saddexda sano ee soo socota ay kordhiso raasamaalkeeda ay bixisay oo ay gaarsiiso hal bilyan oo birr.
Waxa kale oo jirta in raasamaalkii ay shirkaddu bixisay oo si buuxda loo bixiyay, isla markaana la sameeyay awood raasumaal, waxa lagama maarmaan ah in kor loo qaado raasamaalkii ay shirkaddu bixisay, ayay tidhi madaxa shirkadda Trudy Shiferaw. Marka la eego arrintan,
shirkaddu waxay tidhi, “kordhinta raasamaalku waxay abuuri doontaa awood dheeraad ah dhismaha shirkadda 32-dabaq, 3,000 oo mitir oo laba jibbaaran oo ku taal Mexico City Square.” Sannadkii 2014, Shirkadda Dhismaha ee Jiangzi ee Shiinaha ayaa ku guulaysatay dhismaha xarunteeda 1.1 bilyan oo birr.
Shirkadda caymisku waxay heshay 141 milyan oo birr sanad maaliyadeedkii hore, korodh dhan 92.73 boqolkiiba sannad xisaabeedka ka hor. Sidaas awgeed, waxa la fahansan yahay in saami kasta oo qiimihiisu yahay 1,000 Birr uu heli doono faa’iido dhan 290 Birr. Sidaas darteed, shirkaddu waxay kordhisay kharashaadkeeda shaqo 51%, korodhka 18.4 boqolkiiba marka loo eego isla muddadaas sannadkii hore. Sida laga soo xigtay maamulaha guud, shirkadda caymisku waxay ku dadaali doontaa inay samayso caymis yar sanadkan.
Caymiska yar-yar ee ay isticmaalaan beeralayda, gaar ahaan kuwa xoolaha iyo dalagyada ganacsiga, si ay macaamiishooda uga badbaadiyaan waxyeelada abaarta Borena.
Caymiska sanadka 2020/21, oo ay ku jiraan Jet Life, Caymiska Non-Life iyo Caymiska Micro, wuxuu kasbaday 35.4% ka wanaagsan sanad maaliyadeedkii hore, ama 671 million premiums, oo uu koray 40 boqolkiiba qaybta caymiska nolosha, laga soo bilaabo 9.5 milyan khidmadaha la ururiyey bishii Juun.Waxay subaxdii ogaatay inuu kordhay ilaa 13.3 milyan oo birr sannad xisaabeedka u dambeeyay. Dhamaadkii Juun 30, shirkadda caymiska waxay bixisay 192.4 milyan oo birr caymis aan nolosha ahayn iyo 5.1 milyan oo birr oo ceymis nololeed ah. Caymiska Oromia ka hor 12 sano ka hor waxaa lagu aasaasay 25 milyan oo birr iyo 540 saamile.
Total views : 7537930